ဝန်ကြီး အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖုန်းဈေး ကျဆင်းနိုင် | ဧရာဝတီ
၀န်ကြီး အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖုန်းဈေး ကျဆင်းနိုင်
ဇွဲထက်| January 18, 2013 | Hits:8,669
9 | | မြန်မာ့ဆက်သွယ် ဆင်းကတ်ပုံ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး အပြောင်းအလဲကြောင့် GSM/WCDMA ဖုန်းဈေးနှုန်းများ ကျပ် ၁ သိန်းအောက် ကျသွားနိုင်ကြောင်း ပုဂ္ဂလိက ဖုန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူများက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပထမ အသုတ် GSM/WCDMA ဖုန်း ၁သန်းခွဲကို ကျပ် ၂ သိန်း အောက် ချရောင်းရန် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေသည့် ဖုန်း ကုမ္မဏီများမှ တာဝန်ရှိသူ တချို့က ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း လက်မခံဘဲ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးက ကျပ် ၂ သိန်းဖြင့်သာ ရောင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဈေးလျှော့ရောင်းတာ ကျနော်တို့ ကုမ္မဏီတွေအနေနဲ့ ဘာမှ မထိခိုက်ပါဘူး။ ၀န်ကြီးက စောစောကတည်းက လေးငါးရှစ် သောင်း လောက်နဲ့ ရောင်းလို့ ရတာကို ၂ သိန်းနဲ့ တင်ပြီးရောင်းထားတယ်။ ၀ိုင်းကန့်ကွက်လို့ မရဘူး။ အခု ရောင်းမယ်ဆို ၂ သိန်းနဲ့ ရောင်းလို့ မဖြစ်တော့ဘူး” ဟု IGE ကုမ္မဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်သည့် ကိုထွန်းထွန်းလင်းက ပြောသည်။
ကျန်ရှိနေသည့် GSM/WCDMA ဖုန်း ဆင်းကတ် ၃ သန်းခန့်ကို ဧပြီလ အတွင်း GSM ကျပ် ၅ သောင်း၊ WCDMA ကျပ် ၈ သောင်းဖြင့် ရောင်းချ သွားရန် ရှိကြောင်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခများလည်း ဈေး ထပ်ချပေးသွားရန်ရှိကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္မဏီ များ က ခန့်မှန်းထားကြသည်။
လက်ရှိ အခြေအနေအရ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ အပြိုင်အဆိုင် ရင်နှီးမြှုပ်နှံလာနိုင် ကြောင်း စီးပွားရေးသမားများက ပြောသည်။
“ကျပ် ၅၀၀၀ တန် ဖုန်းကတ် ထွက်ရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ထွက်လာမယ်” ဟု ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ ကိုလွင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။
ဆက်သွယ်ရေးတွင် အများပြည်သူ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် တနိုင်ငံလုံး ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု အပြည့်ရရှိစေ ရန် ရေဒီယို၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကြေးနန်း၊ တယ်လီဗီးရှင်း စီမံခန့်ခွဲမှု (Telecommunication Operator)၂ ခုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း မှ သိရသည်။
“ဖုန်းတွေ ဈေးကျပြီပြောတာ့ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးကို ၀ယ်မလို့မေးကြည့်တယ်။ မရသေးဘူးတဲ့။ ကျမတို့ အနေအထား က လည်း သိပ်မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ဖုန်းရှိထားရင် လုပ်ငန်းမှာ အချိန်ကုန် သက်သာမလားလို့ပါ” ဟု ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်း ရှိ အရောင်းအ၀ယ်သမား တဦးက ပြောသည်။
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ၀င်ရောက်ရင်နှီးပြီး ယှဉ်ပြိုင်လာပါက ဈေးနှုန်းများသည် အာဆီယံ နိုင်ငံများနှင့် အညီ ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန် ပန်းဆိုးတန်းရှိ ဖုန်း ၀ယ်ရောင်း ပွဲစားများကလည်း ပြောဆိုသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ တန်ဖိုးနည်းဖုန်း သန်း (၃၀) စီမံကိန်းကို စတင်သည့်အနေဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ပထမအသုတ် ဖုန်းအလုံးရေ ၁သန်းခွဲတွင် GSM ဖုန်း ဆင်းကတ်ကို ကျပ် ၂သိန်း၊ WCDMA ဖုန်း ဆင်းကတ်ကို၂ သိန်းခွဲဖြင့် စတင်ရောင်းချခဲ့ သည်။
ယမန်နေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းကို ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၏ လက်မှတ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မီဒီယာသမားများ “နစ်နာမှု” မရှိစေရန် လုပ်ပေးမည်ဟု သမ္မတ ကတိပေး
မွန်းတည့်နေ ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူနှင့် သတင်းသမားများ၏ အယူခံ ခရိုင်တရားရုံး ပယ်ချ
သပိတ်မှောက် ကျောင်းသူ မချောစုစံ သတင်းဖော်ပြရာတွင် အစိုးရသတင်းစာများ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဟု ဆို
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Shwe Yoe January 18, 2013 - 11:14 am	It will not last long, my friends. The time will come. When the new minister knows how to do Burmese way of runningaministry orabusiness there, everything will be the same. When he finishes filling his bags with money, he will resign and go home like others before him. That’s the Burmese way of serving the people and the country. Believe me. Everything will be the same. Because they all come from the same family called “Thieves”.
Reply	Wisperman January 18, 2013 - 11:27 am	It is good news.
All Sim card, Internet price should be competitive with the South East Asia countries.
also free control to TV stations. but not just giving the permission to those Forever Group, Family Entertainment and Shwe Than Lwin media only, to do TV business. should give permission to set up TV stations to other companies. equal competition.
Reply	swe htwe January 18, 2013 - 1:13 pm	This minister should be kicked out earlier. He is the one who steals our money. How shameful !!
Reply	Shwe Linyone January 18, 2013 - 10:58 pm	He was given more time to steal more from state fund and from us, Swe.
Reply	zaw htay January 18, 2013 - 1:15 pm	၀န်ကြီးပြောင်းဒါ ph ဈေးကျ မကျ တော.မသိပေ.မဲ. internet connection ကျ နေ တယ်
Reply	YeAg January 18, 2013 - 3:12 pm	ဝမ်းသာလိုက်တာ ဗျာ။ ကျွန်တော်က နယ်စပ်မှာဆိုတော့ တရုပ်ကဒ်သုံးရတာ Facebook သုံးလို.မရဘူး။ မြန်မာကဒ်လေးနဲ.ဆိုတော့ တမျိုးလေးနေမှာပဲနော်။
Reply	Myo Nyunt January 18, 2013 - 4:27 pm	ဆက်သွယ်ရေးက တာဝန်ရှိသူတွေ အားလုံးကို
လဘ်ပေးလဘ်ယူကိစ္စများ နဲ့ပတ်သတ်၍ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်
Reply	bamboo January 19, 2013 - 10:26 am	အာဆီယံဈေးအတိုင်းသတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ ကျွနိုပ်တို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်း ပျဉ်းမျှဝင်ငွေက အာဆီယံဒေသတွင်း ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နှိုင်းသေးလို့လဲ ကြည့်လည်း လုပ်ကြပါဦး ပြည်သူတွေက ပွဲပြီးရင်းမွဲ ကွာဟချက်တွေများနေတဲ့……………
Reply	Mret January 18, 2013 - 6:20 pm	ရသမျူ ရိတ်ကြဦးမှာ
နိုင်ငံ့အရေးရင်လေးမိပါတယ် Reply	mr TM January 18, 2013 - 8:31 pm	ကျွန်တော်တို့တာချီလိတ်မှာယိုးဒယားဖုံးဆင်းကတ်တွေတခါတလေအလကားတခါတလေ၁၀ ဘတ်(မြန်မာငွေကျပ်၃၀၀)နဲ့ရောင်းပါတယ်၂၅ဘတ်၅၀ဘတ်တန်ဆင်းကတ်တွေလဲရှိပါတယ် ပြည်သူအားလုံးလွယ်ကူစွာသုံးနိုင်အောင်ပါဒီမှာခလေးတွေကအစပရန်အလုပ်သမားဆိုက်ကာ သမားလူတန်းစာပေါင်စုံသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲအားလုံးသုံးစွဲနိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာမှ ကိုယ်ကျိုးအတွက်မကြည့်ဘဲပြည်သူများသုံးစွဲနိုင်ရန်ဆင်းကတ်များကိုဈေးအပေါဆုံးသတ် မှတ်ပေးစေလိုပါသည်
Reply	Zaybine January 19, 2013 - 10:24 am	All these blood sucker should die soon. They did nothing for the country and they will never change. In other country,5USD/SIM card = 5000 Kyat/Card ? So greedy !! Reply	Mon- Kayin January 20, 2013 - 2:01 am	သိချင်တာလေးမေးပါရစေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက အရာရှိ တစ်ဦးကိုရာထူးမှအနားပေးရင် ဘာဖြစ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောတာလဲ။ သူတို့ရဲ့သဘောအရပဲရာထူးမှပေးထွက်ရတယ်
ူကြီးပဲကြာကြာနေရတယ်။ အသုံးမကျလို့ ကိုယ်ကျိုးကြည့်တာများသွားလို့ အာဏာရူးသွား
လို့ တစ်ခုခုနဲ့ စသဖြင့်ပေါ့ ရာထူးမှထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်လို့မကြော်ငြားတာလဲ၊၊